soosaarayaasha cuntada | Shiinaha qeybiyeyaasha shirkado & Warshad
Riix POP xumbo Dareen Fid ...
Qalin, Sugitaan Xirfadle ...
Nuts Crackers ee Lugaha Carsaan, ...
Xaashida silikoon ee Farsamada ...
Jikada Sink Strainer Baske ...
Birta Birta ahaanta ee Birta ahaanta leh, Qalabka aan ku dhegganayn, Ku adkaysiga kuleylka, iyo weelka mashiinka lagu dhaqo ee leh Silicone Grips on Handles, Qalabka midabka badan ee Jikada lagu karsado, karinta, BBQ iyo inbadan
MAALIYADDA HORE: Qalabka Hilbaha lagu kariyo ee loo kariyey inay ka samaysan yihiin waxay ka samaysan yihiin bir bir ah oo heer sare ah oo aan lahayn, Sibiibiil, iyo naqshad adag oo ah qaabeynta 'Ergonomic design' oo si fudud wax loo xakameyn karo waxna looga soo qaadan karo, u oggolow in gacan keliya lagu isticmaalo. Aad ayey u xoogan yihiin, ma cusla ama aad uma fudud. SAHAN SI AAD U HAYSATO OO NADAAFAD AH: Tongs-keena Cunnada ayaa la socda xarig qufulan oo caqli badan, xir furka ka dib isticmaalkiisa, qaado meel yar oo aad ku keydiso. Waxay hubisaa qabashada iyo xakamaynta wanaagsan, Si fudud loo luqluqdo, makiinadda weelka dhaqata oo nabdoon. Qoyskaaga iyo asxaabtaada ha ka welwelin inay ku raaxaystaan ​​cuntada. PROF ...
Qalab Jikada Casriga ah, Is-bedbeddeli Kara non-ul kulul oo u adkaysta Nylon Cuntada Tong, Cunto karinta u adeegida, loogu talagalay Steak, Salad, BBQ, Grilling iyo FryingSeki Japan
100% Ammaan: Si fudud uma jarin geesaha markay tahay caafimaadka macaamiisheena! Cunnooyinkayaga wax lagu kariyo waa 100% cunto badbaado leh si aad ugu raaxeysato nabadgelyo buuxda oo maskaxeed. Qalabkayagu waa kuwo ku habboon in lagu isticmaalo qalabka wax lagu kariyo ee aan dhejiska lahayn oo sidoo kale ur u adkaysta. Gacan qabasho dheer oo madax weyn leh. aaladda fudud waa wax fudud in la maareeyo waxayna kuu sahleysaa oo xiiso kuu leedahay inaad wax karsato. Waxyeello uma geysato qalabka cuntada ama aaladaha kale ee wax lagu kariyo maxaa yeelay dusha sare ayaa siman oo aan gees lahayn. Ku habboon suxuunta kala duwan, sida ...